5 Fahagagana voajanahary tsara indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Fahagagana voajanahary tsara indrindra any Eropa
Ny toetran'ny tany sy eropeana any Europe no nanome aingam-panahy ny angano. Mahagaga ny tany midadasika tongotra lavitra lalana izay mitarika amin'ny sasany amin'ireo zava-mahatalanjona miavaka indrindra eto an-tany. Ireo zohy hita any Hongria, Ranomasina Grand Canyon misy rano turquoise any Frantsa, lapa-lapa any Aotrisy, ary tendrombohitra misy endrika piramida any Italia, dia 5 amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary tsara indrindra any Eropa.
Ireo zava-mahatalanjona natoraly ireo dia hitondra ny fofonao, ary manome zava-misy mahatalanjona amin'ny fialan-tsasatra tsara indrindra any Eropa. Na liana amin'ny fitsangatsanganana ianao na haka fiara an-tariby, ireo 5 fahagagana dia tsy maintsy tsidihina tsotra izao fitsangatsanganana any Eropa, farafaharatsiny indray mandeha eo.
1. Fahagagana voajanahary tsara indrindra any Eropa: Eisriesenwelt, Aotrisy
Azonao atao ny mahatsiaro an'i Salzburg avy amin'ny The Sounds of Music ary ireo ankizy Von Trapp mihira ho any an-tendrombohitra. fa, ambany tendrombohitra Hochkogel, miafina ny lava-bato lehibe indrindra any Eoropa. Lava-bato ranomandry Eisriesnwelt any Aotrisy no iray amin'ny fahagagana voajanahary mahavariana an'i Eropa. Ambonin'izany rehetra izany, ny misongadina amin'ity velarana 3000o ity no tranon'ny ranomandry, Eispalast.
Ity trangan-javatra ara-boajanahary ity dia ny lava-dranomandry lehibe indrindra eto an-tany, ary noforonina tamin'ny alàlan'ny fananganana ranomandry ambanin'ny lava na vatosokay ambanin'ny tany.
Ahoana no ahatongavako any anaty lava-dranomandry Eisriesnwelt?
Ny mahaliana an'io goa 40km io dia fiaran-dalamby miala an'i Salzburg, ary mijanona isaky ny ora ny fiaran-dalamby. Ho fanampin'ny Werfen, misy 15 Mandeha minibus mandeha amin'ny lava-bato. Ary, ankamaroan'ny mpizahatany mankany Alemana, tsy mbola nahita ity fahagagana ara-boajanahary ity, noho izany dia mety ho iray amin'ireo mpitsikilo manokana ianao. Azonao atao ny mampiakatra 4 ora ambony na 3 fitsangatsanganana milamina miaraka amin'ny tariby fiantsonan'ny tariby.
Vidin'ny lamasinina mankany Munich mankany Salzburg
Vidiny hatrany Salzburg amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby
Ny vidin'ny Graz mankany Salzburg
Vidin'ny lamasinina any Linz mankany Salzburg
2. Fahagagana voajanahary tsara indrindra any Eropa: Ny Gorondava Verdon, Frantsa
Niainga nankany amin'ny faritra atsimo Provence i Grand Canyon any Frantsa. Fantsona sy havoana mivaingana, manaova fivoarana mahavariana ho an'ny rano farihy tsy mampino. Ary noho izany, ity anarana tsy manam-paharoa mahafinaritra ity hoe "Gorges du Verdon" dia midika hoe Gorges maintso, amin'ny teny frantsay.
This amazing lake in Provence is perfect for summer swimming and chilling, ary koa paradisa an-tongotra. Misy 1500 lalana ho an'ireo mpihanika mafana fo maniry maniry hidera ity fahagagana eropeana ity etsy ambony. Noho izany, misafidy ianao raha ianao te handro amin'ny masoandro fotsiny ambony sambo, na mahita an-tongotra.
Ahoana no ahatongavako any Gorges Du Verdon?
Ny tanàna akaiky indrindra dia Moustiers-Sainte-Marie, ary afaka mandeha any ianao amin'ny lamasinina avy any Paris. Avy eo dia mitodi-doha mankany amin'ny fidirana ao amin'ny tetezana Pont du Galettes, hiditra amin'ity fahagagana voajanahary ity.
Vidin'ny lamasinina any Paris mankany Marseilles
Marseille mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Paris
Ny vidin'ny lamasinina any London mankany Paris
Marseilles mankany amin'ny Clermont Ferrand Train Prices
3. Fahagagana voajanahary tsara indrindra any Eropa: Matterhorn, Italia
Monte Cervino any Italia avaratra dia 4,478 metatra ambonin'ny ranomasina. Ankoatry ny, Matterhorn dia malaza amin'ny endriny piramida somary tonga lafatra. Natsangana tamin'ny fomba voajanahary ny Matterhorn rehefa nifampidipiditra ireo tany afrikanina sy eoropeana. Vokatry ny fihetsehana ity tany ity, ilay vatolampy lehibe dia nahita ny làlana ambony.
Raha mitady zava-nitranga tsy hay hadinoina ao amin'ny Matterhorn ianao, dia mijanòna ao an-tanàna igloo eo amin'ny fototry ny tendrombohitra. Ny ranomandry sy ny lanezy igloo dia mandray mpandeha amin'ny alina tsy hay hadinoina. Raha matahotra ny hatsiaka ianao, zava-pisotro iray sotro fisotroana anao dia hitazona anao rehefa mankasitraka ilay tendrombohitra mahafinaritra amin'ny alina be kintana ianao.
Ahoana no ahafahako mahazo Matterhorn?
Io mahagaga voajanahary io dia vao manomboka eo amin'ny dianao mahavariana. Azonao atao ny mandeha mankany amin'ny glacier Matterhorn fiaran-dalamby Tsidika avy any Zermatt. Any amin'ny fiaran-dalamby ambony indrindra any Eropa, azonao atao ny mankasitraka ny panondro 360º an'ny Italia, Soisa, sy Frantsa. Midika izany fa azonao atao ny mahazo ny sary tonga lafatra amin'ny zoro rehetra amin'ny Lohataona, fahavaratra, na rakotry ny oram-panala rehefa ririnina.
Basel mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby mifangaro
Geneva mankany amin'ny vidin'ny Zermatt Train
Bern ny vidin'ny lamasinina Zermatt
Vidin'ny lamasinina Zermatt mankany Lucerne
4. Zavaboary Aggtelek, Hongria
Ny zohy Aggtelek dia fahitana voajanahary mahatalanjona iray any Eropa. Ny anarana tsy mahazatra dia midika hoe 'rano mitete' izay niavian'ny fizotran'ny rano voajanahary namakivaky ny vato. Noho izany, ny loharano ho an'ny endriny mahafinaritra ao amin'ireo lava-bato mahafinaritra ao Aggtelek valan-javaboary.
Ny Baradla Domica Cave dia rafitra lava-bato lava manelanelana 25 km eo anelanelan'i Hongria sy Slovakia. Toy izany koa a UNESCO World Heritage toerana.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny zohy Baradla Domica?
Ny zohy Aggtelek dia misy 4 ora fiaran-dalamby dia avy any Budapest miaraka amin'ny fanovana. Noho izany, raha toa ianao ka manomana fitsangatsanganana antoandro avy any Budapest, mety ho somary tery kely.
Vienna mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Budapest
Prague mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Budapest
Ny vidin'ny lamasinina mankany Munich mankany Budapest
Graz mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Budapest
5. Fahagagana voajanahary tsara indrindra any Eropa: The Black Forest, Alemaina
Malaza noho ireo hazo misitery sy matevina, ny Ala Mainty any Alemana dia fahagagana voajanahary mahavariana an'i Eropa. Ity tandavan-tendrombohitra mahatalanjona ao Baden-Wurttemberg ity dia nanentana ny angano maro, sahala amin'ny tantaran'i Grimm. Io no toerana andehanananao any ivelan'ny tanànan'i Baden-Baden spa, ary mankany anaty ala mahafinaritra ny angano sy ny cuckoos.
Raha liana amin'ny mpitsangatsangana ianao, Triberg Falls, miandry fiakarana ala an-ala. Fomba iray hafa tsara hitrandrahana io zava-mahagaga voajanahary mahafinaritra io any Alemana dia ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny mpitari-dalana satria ny zavatra farany tadiavinao dia nanjavona tany amin'ireo tany be hazo..
Raha fintinina, ireo 5 zava-mahatalanjona voajanahary tsara indrindra any Eropa no zava-miafina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Noho izany, azonao atao tsara ny mijery an'i Eropa toy ny mpizahatany ary manao malaza làlana fitsangatsanganana, na ianao dia afaka mahita sy mahita ny teninao tsara tarehy sy tsara tarehy eran'i Eropa. Most, zava-dehibe, ireny fahagagana rehetra ireny dia azo jerena amin'ny lamasinina sy fomba hafa fitaterana, avy any afovoan-tanàna any Eoropa.
eto amin'ny Save A Train, we will be happy to help you find how to get by train to any of these natural wonders.
Te hampiditra ny bilaoginay “Fahagagana voajanahary 5 tsara indrindra any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/best-natural-wonders-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ja ny / en na / de kokoa fiteny.
naturalwonder naturalwonders naturalwonderseurope Train Travel traintravelaustria traintravelfrance traintravelgermany
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Norvezy, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Travel Europe